Maareynta Ballamaha Caafimaadka: Hagaha Daryeel bixiyaha | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Maarso07, 2022 Context link
Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Context link Maarso07, 2022 Context link
Haddii aad tahay daryeele xubin qoys ama saaxiib leh xaalad caafimaad oo joogta ah, waxay u badan tahay inaad aado ballamahooda badan ee caafimaadka. Waxaa macquul ah inaad si joogto ah ula xiriirto dadka ka tirsan kooxdooda daryeelka caafimaadka. Adeegso tallooyinkan si ay kaaga caawiyaan inaad ahaato qof habaysan. Oo xaqiiji in xubnaha qoyskaaga ama saaxiibkaaga ay helaayan daryeelka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah.
Ballanta ka hor
Haddii aad tahay mid ka mid ah kooxda daryeel bixiyayaasha, xaqiiji in qof kasta uu ogyahay wax ku saabsan ballanta soo socota.
Xusuusi qofka aad daryeesho wax ku saabsan ballanta ugu yaraan toddobaad ka hor.
Weydii qofka ku jira daryeelkaaga haddii ay qabaan wax tabasho ama su'aalo ah. Kuwan ku qor diiwaanka daryeelahaaga oo soo qaado.
Markaad ballanta samaysanayso, waxa laga yaabaa inay ku caawiso inaad waydiiso waxa dhici doona. Tusaale ahaan, dhiig ma la qaadi doonaa? Sidoo kale, hel waqti cayiman oo guud. Badnaansha macluumaadka aad taqaano ee soo gelaayo, fududaanta in la diyaariyo. Waxa sidoo kale laga yaabaa inay ka badbaadiso saaxiibkaaga ama xubnaha qoyskaaga inay walwalaan ama ay cabsadaan.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad wacdo qorshaha caafimaadka ee loogu talagalay qofka aad siiso daryeelka. U sheeg wax ku saabsan ballanta iyo wixii kale ee aad qorsheeysatay. Qabkaas, waxaad ku ogaan kartaa haddii ay jiraan kharashyo ka baxsan jeebka.
Miyaad u baahan doontaa kursiga curyaanka ama wax taageero ah oo kale? Horey u wac si aad wax walba lagugu sii hagaajiyo ka hor inta aadan imanin. Baro wax badan oo ku saabsan daryeel siinta ku aadan dadka naafada ah.
Diyaarso dhammaan waraaqaha shaqada, iyo sidoo kale aqoonsiga qorshaha caafimaadka ee hadda jira iyo/ama kaarka(kaararka) Medicaid iyo Medicare.
Haddii ay suurtagal tahay, waa fikrad wanaagsan inaad u ogolaato qofka aad siiso daryeelkaaga inuu ka jawaabo su'aalaha bixiyaha. (Marka laga reebo haddii bixiyaha uu su'aal ku waydiiyo, dabcan.)
Xaqiiji inaad ku darto qofka aad daryeesho dhammaan wada hadalada lala yeelanayo bixiyayaasha. Ha uga hadlin iyaga sidii iyaga oo aan qolka ku jirin.
Keen liis taarikhdiisa cusubtay oo ay ku jiraan dhammaan daawooyinka iyo kaabisyada.
Qoraal ka qoro marka xirfadlaha caafimaadka uu macluumaadka la wadaagayo qofka ku jira daryeelkaaga.
Haddii aadan fahmin shay ama aad sheegi karto in uu jiro wareer, ka codso bixiyaha inuu qaab kale oo ka duwan u sharaxo waxyaabaha.
U gudub liiska su'aalaha iyo walaacyada aad horay u sii diyaarisay. Xitaa ka sii wanaagsan, keen 2 nuqulo si aad u siiso bixiyaha nuqul.
Xushmee asturnaanta qofka aad daryeelka siineyso. Ka bax qolka marka lagama maarmaan tahay
Buuxi warqada rijeetada daawooyinka oo soo qaado wixii qalab caafimaad ah oo loo baahan yahay isla markiiba. (Kuwani waa hawlo aad u wanaagsan oo loogu talagalay qof kale si uu u sameeyo haddii ay ku weydiinayeen sida ay ku caawin karaan.)
Sameyso ballamaha dabagalka ah, haddii loo baahdo.
Markaad guriga ku sii socoto, waydii saaxiibkaaga ama xubinta qoyskaaga wax ku saabsan ballanta iyo waxa bixiyaha uu dhahay.
Xusuusnow, booqashooyinka caafimaadka waxay noqon karaan kuwa jaahwareer leh. Noqo dhageyste wanaagsan oo u oggolow inay wadaagaan dareenkooda.
Qaar ka mid ah qorshayaasha caafimaadka ayaa sidoo kale nolosha u fududayn kara daryeel bixiyeyaasha
Qofka aad daryeesho miyuu u qalmaa Medicaid iyo Medicare labadaba? Haddii ay sidaa tahay, waxay u baahan karaan inay eegaan qorshaha caafimaadka ee laba-geesoodka ah. Qorshayaashaan waxaa sidoo kale loo yaqaan Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah. Qorshayaasha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo waa nooc ka mid ah qorshaha Medicare Advantage. Waxay kala shaqeeyaan xubnaha gobolka qorshaha Medicaid, kaas oo fududeeya in la fahmo waxa lagu daboolo Medicaid iyo wuxuu daboolo Medicare.
Qorshayaasha laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare ayaa sidoo kale waxaa ku jira isku duwidda daryeelka. Taasi waa caawimaad weyn marka aad la shaqaynayso dhakhaatiir, khabiiro iyo adeegyo daryeel oo badan. Waxayna hawsha u sii sahlaysaa daryeelayaasha iyo sidoo kale xubnaha.